Ividiyo: Ingabe Ukumaketha Kwenza Umkhiqizo? | Martech Zone
Lokhu ukuthola okuhle nokuhlekisayo okuvela kuFrank Dale, CEO we Ukuhlanganiswa. Empeleni ngazi izinkampani ezimbalwa lapho ukumaketha kudlula khona ulwazi lomsebenzisi nezinsizakalo ezinikezwa ngumkhiqizo. Eqinisweni, empeleni ngicelile imiboniso engazukuvula ngisho uhlelo lwabo lokusebenza, esikhundleni sokusebenzela ipowerpoint ekhanyayo nebenyezelayo. Lokho akuyona inkinga uma umkhiqizo wakho ukhangiswa, kepha ngiwubonile uqhekeza ezinye izinkampani lapho ukumaketha kuyisithombe esithwebuliwe esithwebula izithombe, esinobuhaba somkhiqizo uqobo.
Ukumaketha kubeka okulindelwe, ukuthengisa kuyakuqinisekisa futhi kuqoqe ikhomishini, iklayenti lisayine bese yehliswa ngokushesha. Inkinga imane yehlele ekwehleni kubaphathi be-akhawunti namathimba ezinsizakalo zamakhasimende. Lawo maqembu anakho ukugcinwa njengenye yezinkomba zabo ezisemqoka zokusebenza… ngakho-ke lapho izinkampani zihamba noma zingavuseleli, abaphathi be-akhawunti kanye namathimba ezinsizakalo zamakhasimende abophezelekile. Kuphenduliswa okuthile okungalawulwa ngokuphelele.
Ingabe kuyinto efanele ukuyenza? Angicabangi ukuthi ukumela kabi umkhiqizo wakho kuke kwaba yinto efanele ukwenziwa. Kodwa-ke, ezinye izinkampani ezikwenzayo zivame ukukhula ngokushesha. Ngokukhula ngokushesha, bayakwazi ukuwina isabelo semakethe, bazuze utshalomali, futhi baphinde batshale imali Thola esithombeni abasibonisile. Lapho ezinye zalezi zinkampani zenza amashumi noma amakhulu ezigidi zamaRandi, kunzima kimi ukuthi ngithi iqhinga elibi. Kuyinto nje engingayithandi. Angizithandi izinkampani ezikwenzayo. Futhi angithandi ukuncoma lezo zinkampani kumakhasimende ami.
Tags: umkhiqizoukuphathwa komkhiqizoukumaketha komkhiqizoUkukhanya kwe-RCI-Whitest Kids U'Know
Okubonakalayo: I-Marketpath CMS ne-Ecommerce
Aug 23, 2011 ngo-7: 31 PM
Hahaha, "kungani umthengi ekhetha isiphuzo se-incandescent?"
Aug 24, 2011 ku-12: 21 AM
Ividiyo enhle uDoug kepha kufanele ngithi amavidiyo ahlobene nawo aba mnandi futhi anganambitheki ekujuleni kwakho.